Salady Ropotamo Fahatsapana zavakanto - hevitra ho an'ny trano sy zaridaina
18.09.2014 Navoakan'ny: Art Senses
nalona, Hevitra ao an-trano, fomba fanamboarana
Recipe ho an'ny ririnina ankafizin'ny rehetra - salady Ropotamo.
Ireo vokatra takiana amin'ny fatra iray (eo amin'ny siny 8 lehibe mahazatra):
Tsaramaso 1 kg
1 tavoara feno voasary amidy
1 tavoara be sa dibary vita amin'ny mofomamy
1 tavoahangy masira voatabia masira
Karazany 1 kg
1 tavoara kesika iray voanio (azo atao)
Ny rohy an'ny Voahangy 1-2 Ilay marina
Solika - 180 c
Vinaingitra - 180 c
Fanamarihana: Amin'ity tranga ity, ireto dia legioma vita amin'ny trano sy ovy masaka izay arakaraka ny tadiavin'ny tena manokana. Raha misafidy ny mampiasa voanio ianao dia tsy manome toky ny tsirony sy ny kalitaon'ny valin'ny farany.
Mahandro tsaramaso sy karaoty tsy misaraka isika. Hetezo ny karaoty ho toy ny cubes, roas mofomamy sy atsotra, persily.
Ahena ny menaka, ny vinao, ny sira ary ny siramamy, ary avelao hijanona amin'ny fatana mandra-pitete ny sira sy ny siramamy. Esory amin'ny fatana hangatsiaka.
Manomana vilia misy ny halehiben-toerana isika ary afangaro ny karaoty efa nahandroina, betina voatoto sy dipoavatra, persily ary arotsaho ao anatiny ny voan-kena. Farany dia manampy tavoara voatabia isika. Mandrosoa ary arotsaka ao amin'nyade-dranomasina mangatsiaka. Ary averinay tsara ihany koa. Avelao izy io hijoro mandritra ny alina ao anaty hatsiaka mba afangaro tsara ny tsiro ireo menaka. Ny ampitso, amin'ny maraina, mameno fitoeran-drano izahay ary manisy ditra. Io izany!
ririnina trano, nimonomonona tao an-trano, sakafo am-bifotsy, famehezana, sakafo am-bifotsy, fomba fahandro amin'ny ririnina, fomba fahandro miaraka amin'ny tsaramaso, fomba fanamboarana, fomba fahandro amin'ny ririnina, mimonomonona izahay, salady, Salady Ropotamo, hevitra ho an'ny tokantrano, famolavolana anatiny, furnishing, hevitra anatiny, hevitra famolavolana, trano maoderina, haingo hevitra, hevitra zavakanto
Amboara iray misy… sandwich
Raha gaga ny vahininao ary tsy vonona amin'ny sakafo ianao, dia manaova haingana ...
Manompoa tongolo ovy tsara tarehy amin'ny endrika raozy. Hetezo na mametaka ovy ...
Amboara misy sôkôla likera
Mora ny resa-po ary azo antoka fa manaraka azy avokoa ny rehetra. Olana takiana: ...
Voahangy vita amin'ny koba
Ity misy hevitra mahafinaritra momba ny fandefasana ny koba izay azo amidy vonona ...
Tongotra akoho misy holatra ao anaty harona pastry
Ny bokotra dia angamba ny sakafom-borona fanta-daza indrindra amin'ny sakafo hariva amin'ny fianakaviana. Inona no hataonao ...
Endrik'anarana amin'ny teny finoa "Pula"
Pula, Nisu na anarana hafa (Pulla, Nisu, Vetebröd, Kardemummabullar, Jul mino) no nomena anarana ...
Mahafinaritra, haingana sy malefaka libaney (Layali Lubnan)
"Libaney Nights" dia tsindrin-tsakafo Arabo nentim-paharazana miaraka amin'ny tsirony mahafinaritra, miaraka amin'ny ...
Sakaosy pancake Rosiana ao anaty koba - "Kurnik"
Kurnik ("akoho" - akoho) dia mofomamy pancake fialan-tsasatra Rosiana mahazatra miaraka amin'ny ...